विमान दुर्घटना भै ठुलो क्षति भएपछि बंगलादेशले नेपालमाथि लगायो यस्तो गम्भीर आरोप ! - Tanahu Post
विमान दुर्घटना भै ठुलो क्षति भएपछि बंगलादेशले नेपालमाथि लगायो यस्तो गम्भीर आरोप !
अवतरण गर्नु पहिले पाइलर्टले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टावरमा सम्पर्क गर्दा विमानस्थल उत्तर तर्फबाट ल्यान्ड गर्न सुझाब दिएका थिए। टाबरको सुझाब नमान्दा दुर्घटना भएको उनले दाबी गरे। पाइलट—एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सम्वादमा पनि विमान चालक अलमलिएकाे सुनिएकाे छ। एटिसीले विमान दुर्घटना पूर्व चालकदलसँग गरेको संवादको अडियो रेकर्ड समेत सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल आइडल : आज नोमिनेसनमा नपरेकोले सबै खुसि !!!उत्कृष्ट चारबाट विजेता छानिँदै
Prevदुर्घटनामा बाँचेकी बंगलादेशी अहमदले भनिन्: नेपालीले जस्तो चाँडो उद्दार कतै पनि हुदैन !
Nextस्थलगत रिपोर्ट : भोलेबाबाको ताकमा युवतीहरू – कैलालीबाट लाइभ !
म त भए खरानी !चर्चित गायक पुस्कल शर्मा र सारिकाको बिहे हुदै गर्दा पुस्कलको भयो यस्तो दुर्गती, भिडियोमा हेर्नुहोस (46)